Umhla My Pet » 5 Emazenziwe ezenziwayo Ukuthandana ngempumelelo umxokozelo
ngokuthi April Aragam
5 Emazenziwe ezenziwayo Ukuthandana ngempumelelo umxokozelo
ukubuyekezwa: Oct. 15 2020 | 3 min ukufunda
ukuthandana kwikhompyutha iye yaba yenye yeendlela ethandwayo ukuhlangabezana abantu abatsha. ukuthandana online, ngathi nantoni na, linamanqaku zayo ezintle nezimbi. Ngoko njani ukuze ibe yimpumelelo ngokwakho? Eli nqaku lithetha 5 ukwenza kunye oyinikwa eya kukunceda kuhamba intanethi ndithandana kancinane ngaphezulu.
Yenza: Uzalise iprofayile ukuthandana
Kubalulekile ukuba uphendule imibuzo kwindawo yabucala abathandanayo. Oku ukufumana abantu ithuba lokuqala ukufunda isuntswana ngawe. Awunayo ukuxelela ibali lakho lobomi bonke, kodwa wena ufuna ukunika iinkcukacha ezibalulekileyo ubuncinane isibini. Kwi ngam icandelo ndinikhumbula ufuna ukukhankanya usebenza okanye ukuya esikolweni nokuba, into oyithandayo ukwenza lakho ngexesha, uze ukhankanye into bit elikhethekileyo wanenza ahluke kwabanye abantu. Ngaba anikela ngexesha ikhitshi lesuphu kabini ngenyanga? Ngaba unecawa iklabhu incwadi uwalesayo kuphela ziyahlonelwa? Chaza ukuba! Oku kungakhangeleka ngathi yinto encinane na kuni, kodwa omnye efunda iprofayile yakho kuya kukunceda ume ngaphandle kwabanye.
musa: Thetha amathemba akho namaphupha ubudlelwane
Yinto entle ngokugqibeleleyo ukukhankanya ukuba ukhangela ubudlelwane nje okanye enye into ixesha elide. Ufuna ukuba udibana nomntu ofuna into enye. Ukuba uqalisa ukuthetha ngendlela wena uza ukuchitha iKrismesi yakho yokuqala kunye, uhlobo lomtshato ubuzifihla ukuba bephupha ngayo, okanye ufuna ukuba bangaphi abantwana ukuba, ukuba uhamba ukoyikisa imihla ezinokwenzeka off. Shiya loo ncoko ukuze kamva xa uye waba ezimandundu kakhulu.
Yenza: Yongeza imifanekiso yakutshanje
Ubuya kukhetha ukuba ifoto usithabathileyo kwiminyaka emithathu edlulileyo epakini ukuba uzive ngathi IBHOMBU, kodwa kubalulekile ukuba usebenzise ifoto zakutshanje. Abantu ukutshintsha ngokuhamba kwexesha nangona ukuze kuxoxa nawe nangoku khangela kakhulu ngathi ifoto endala. Wakho umbala iinwele, ubude, nesimbo Mhlawumbi watshintsha. Usenokuba lehla okanye kwambatha iikhilogram ezimbalwa. Nokuba usenokuba isimbo bakho ngobuqu. Ukuba kulubeka ifoto kunye udibane nomntu umntu, uyazi ukuba uza silindele umntu kwifoto. Cinga ubuya kuziva njani ukuba umntu udibana kuma kunyaka emibini photo ubudala apho waba iinwele omncinane kakhulu kwaye ngaphantsi isisu kancinane. Oku akuthethi ukuba abantu zangaphandle ukuba Ndifuna ukwazi ukuba bahlangene.
musa: Kulinda ixesha elide ukuze
kwiziza ukuthandana Intanethi kunokuba ibe yindawo kakhulu ukudibana nabantu abatsha, kodwa mhlawumbi akufuni ubudlelwane ukuhlala online iinyanga mikhuhlane. Kubalulekile ukuthatha ubudlelwane yakho entsha esuka intanethi kuye buqu. Xa bananise kokuba imeyile kunye neetekisi ungasa kwinyathelo elilandelayo, leyo ethetha efowunini. Ukuba nangoku uziva uqhagamshelwano kwaye sifuna ukufikelela, ukwenza umhla! Ukuba uhlala kude kwaye akanako nje ukuqhuba ukuhlangabezana omnye, ubuncinane Skype de unako.
Yenza: Uthembe emathunjini yakho
Ukuba ufumana imvakalelo funny umntu ngenxa yento u yena wathi okanye ukwenza imvelaphi Itshekhi ukuba umfumene into engeyiyo dibanisa, Siyathemba ukuba imvakalelo. Ngokuqinisekileyo ukubuza imibuzo malunga, Ke ukuba niphikele uzive ngathi kukho into icimile, lixesha uzakubuyela kwaye kudibana nabantu abatsha. Akufuni ukuchitha isiqalo ulwalamano olutsha okhetho amanga kunye nobunyani kwaye basoloko bezibuza ukuba into elandelayo emlonyeni wakhe abuyonyaniso. uthembe imvakalelo yakho emathunjini Soloko.
ukuthandana intanethi akusoloko ukukhwela egudileyo. Uya kwenza iimpazamo nazi ngcono kwixesha elizayo.
Romance, Imvakalelo okanye into Senza?
Top Five Tips Online Safety Dating
Ezintlanu Ubudenge Online Dating Yabucala ukuphepha
umphezulu 10 Tips for Ukuthandana ngempumelelo